Yakatumirwa ne Tranquillus | Oct 6, 2018 | hofisi
Nzvimbo dzehutano dzakawanda dzinobatsira zvakawanda, asi kungwara uye kuvanzika hakusi chikamu chayo. Hazvishamisi kunzwa nezvevanhu vakazviwana vasingabatsiri nekuda kweshoko rakashata, kunyange rekare. Izvi zvinogona kuve nengozi padanho remunhu, asiwo padanho rehunyanzvi uye nekukurumidza kunetsa. Nzvimbo yakaita se Twitter ndiyo inonyanya kutyisa pakuti hunhu hwayo hwepakarepo hunogona kukurumidza kutungamirira mukusagadzikana pakati pevashandisi veInternet. Saka isu tichazoda kuchenesa maTweets edu, asi basa racho rinogona kungoerekana raita serakaoma kupfuura zvanga zvichitarisirwa…
Ichokwadi here kubvisa tweets?
Paunenge uchida kubvisa ma tweets kana kubvisa matanho ose emakate ako, unogona kuora mwoyo uye zvibvunze kana izvi zvichibatsira chaizvo. Tinofanirwa kufunga pamusoro payo nokuti nzvimbo dzekugara panzvimbo dzevanhu dzakagadzirwa nenzvimbo inokosha zvikuru ikozvino uye basa redu rinogona kutitarisana nejiffy.
Haasi munhu wese achada kuzvidzivirira, asi zviri nani kungwarira nguva zhinji. Kune rumwe rutivi, kana iwe uri munhu ari kushanduka munharaunda umo mufananidzo wakakosha, munhu waungada kukuvadza semuenzaniso, iwe uchafanirwa kuzvidzivirira zvakanyanya sezvinobvira. Sei ? Zvakangodaro nekuti account yega yega pasocial network ingango tariswa kusvika chinhu chinokanganisa chawanikwa. Vanhu vane hutsinye vanotora zviratidziro zvayo, kana kutora mashoko ako zvakananga pawebhu (saiti, bhurogi, nezvimwewo) kuratidza zvese masikati machena. Iwe unogona zvakare kutengeswa neinjini yekutsvaga, senge Google semuenzaniso, iyo inogona kureva yako yekukanganisa zvinyorwa mumibairo yayo. Kana iwe uchida kutsvaga SEO-inoenderana tweets, ingoenda kuGoogle uye tsvaga matweets nekunyora zita reakaundi yako uye kiyi yezwi "twitter".
VERENGA Basa reGoogle, kana kuti sei kuziva zvose pamusoro pezviito zvako zvine chokuita neGoogle nemasangano ayo akasiyana-siyana.
Pasina kuve munhu weruzhinji anotariswa nezve zviito zvake zvishoma uye masaini, zvingave zvisingafadzi kana waunoshanda naye kana mumwe wemamaneja ako akawana ma tweets achisiya pfungwa yakaipa, uye izvi zvinogona kusiririsa kuti zviitike nekukurumidza, nekuti kunyangwe vatori vemukati vanonyanya kuwedzera tsika. yekuenda pasocial network kuti uwane pfungwa yemumiriri anonyorera chinzvimbo kana basa.
Naizvozvo zvine chokwadi chekuti kuva nemufananidzo usingarambiki pasocial network kunokudzivirira kubva kumatambudziko mazhinji, saka kudzima zvauri zvekare pa Twitter kunogona kubatsira kukudzivirira kubva kune chero zvisingafadzi zvinoshamisa. Asi zvino, sei?
Bvisa ma tweets ake ekare, chinhu chakaoma
Twitter ipuratifomu isingafambisi kubviswa kwematweets ekare uye basa iri saka rakanyanya kuomarara kupfuura kufungidzira kumberi. Hongu, kupfuura zviuru zviviri zvematweets achangoburwa, hauchakwanisa kuwana mamwe pane yako nguva yakatarwa, uye iyi nhamba inogona kusvikwa zviri nyore papuratifomu ino iyo inowanzoitika tweeting isingawanzo. Saka unobudirira sei kudzima maTweets echikuru? Iwe unozofanirwa kuwana nemaoko aya maTweets uchishandisa akawanda kana mashoma akaoma matekiniki. Chinhu chimwe ndechechokwadi, iwe uchada moyo murefu uye maturusi akanaka ekubvisa zvinobudirira.
Bvisa mamwe tweets kana kuita huru yekuchenesa
Iwe hauzove nemano manipulations ekuita kana iwe uchida kudzima mamwe maTweets kana ese ese, saka nyatso funga usati waita sarudzo yako kudzivirira zvisina basa manipulations.
Kana iwe uchinyatsoziva kuti ndeapi matweets aunoda kudzima, shandisa iyo yekutsvaga yepamusoro kubva kune mudziyo (kombuta, smartphone, piritsi) kuti uwane yako matweets ekudzima. Nekudaro, kana iwe uchida kuita kucheneswa kwese kweako matweets ekare, iwe unozofanirwa kukumbira zvinyorwa zvako kubva pane saiti kurongedza uye kudzima matweets ako. Kuti uzviwane, iwe unongofanirwa kuwana yako account marongero uye woita chikumbiro, maitiro acho ari nyore uye anokurumidza saka wadii kuzvinyima?
Pane akati wandei maturusi anokutendera kuti udzime maTweets ako ekare zviri nyore uye nekukurumidza, saka zvinokurudzirwa kuti utore iwo ekuchenesa kunoshanda izvo zvisingazobata chero zvisingafadzi zvinoshamisa.
Iyo Tweet Deleter chishandiso chakakurumbira, sezvo yakazara kwazvo. Chokwadi, sezita rayo rinoratidza zvakajeka, rinoshandiswa kudzima ma tweets. Ichakubatsira iwe kudzima nhamba huru yematweets kamwechete nesarudzo yekusarudza zvirimo kuti udzime negore semuenzaniso. Izvi zvinokutendera kuti uchenese makore ako ekutanga ematweets, semuenzaniso.
Asi chishandiso ichi hachigumiri ipapo! Iwe unogona kusarudza matweets akavakirwa pamazwi akakosha uye mhando yavo yekuchenesa uye nekukurumidza. Kana iwe uchida kutanga kubva pakatanga, chishandiso ichi chinobvumirawo kudzima zvachose kwese chiitiko chako pachikuva.
Tweet Deleter saka chishandiso chinoshanda uye chinochinjika kuve neakaundi isingatadzirwe. Nekudaro, haisi yemahara sezvo uchizofanira kubhadhara madhora matanhatu kuti uishandise. Asi pamutengo uyu, hapana kuzeza kwechinguva kupihwa kuita kuripo.
VERENGA Nzira yekugadzira nzira yekudimbudzira yekhibhodi mukati Windows 10?
Nekune rimwe divi, kana panguva iyo iwe uri panzvimbo iyo isingabatsire kubhadhara kune application inogona kudzima maTweets ako, unogona kusarudza Tweet Delete, iyo yemahara kushandisa. Ichi chishandiso chinoshanda nekusarudza zuva iro mushandisi anoda kudzima matweets. Tweet Delete inotarisira zvimwe. Nekudaro, chiitiko ichi hachidzoreki saka iva nechokwadi chesarudzo yako usati watanga. Kana iwe uchitya kudemba kumwe kudzima, usazeze kuita backup nekudzoreredza ako akachengetwa usati waita chero chiitiko.
Nzira Yokushambidza Nayo Twitter Profile uye Kuchengetedza Mifananidzo Yako? August 25th, 2020Tranquillus
pashureMaxicours: the reference of tutoring online cheap
zvinoteveraChenesa yako Facebook mbiri, unzwisise kukosha kwenzvimbo dzekudyidzana dzemufananidzo wako.